“Waa wax iska caadi ah in la isbar-bardhigo xiddigaha Rashford iyo Cristiano Ronaldo” – Gool FM
“Waa wax iska caadi ah in la isbar-bardhigo xiddigaha Rashford iyo Cristiano Ronaldo”
(Manchester) 10 Dis 2019. Marcus Rashford ayaa xilli ciyaareedkan sameeyay qaab ciyaareed cajiib ah, isagoo dhaliyay 13 gool isla markaana caawiyay 4 gool kale, 21 kulan uu ka ciyaaray dhamaan tartamada kala duwan, waana shaki la’aan inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican kooxda Manchester United.
Tababaraha kooxda Manchester United ee ee Ole Gunnar Solskjær ayaa carabka ku adkeeyay macnaha isbar-bardhiga u dhaxeeyay dhawaanahan xiddigaha Marcus Rashford iyo Cristiano Ronaldo.
Macalinka reer Norway ayaa aaminsan inay tahay wax iska caadi ah isbar-bardhiga xiddigaha Marcus Rashford iyo Cristiano Ronaldo maadaama ay isku mid ka yihiin booska iyo astaamaha jir ahaaneed.
Tababare Solskjær ayaa wareysi uu ku bixiyay warbaahinta wuxuu ku sheegay:
“Waa wax aad u fudud in la isbar-bardhigo labadan xiddig, labadooduba waxay ku raaxeysanayaan xirfado, qaab jireed, booska, astaamaha iyo wax walba”.
“Rashford wuxuu leeyahay dhamaan waxyaabaha u suurtogalinaya inuu noqdo ciyaaryahan aad u fiican”.
“Waxaan u rajeyneynaa inuu sii wato heerkaan, ma doonayo inaan ka hadlo tirada goolasha, Inta uu u ciyaarayo si toos ah oo qumman, isla markaana uu ka fikirayo inuu dhaliyo goolal iyo inuu abuuro fursado, wuxuu dhalin doonaa goolal ilaa iyo dhamaadka”.
Tababare Valverde oo shaaca ka qaaday sababta uu Lionel Messi ugu yeerin kulanka caawa ee Barcelona